Aragtidaan Hal-abuurka ah ee Iibinta ah waxay Weyneysaa Shirkaddaada $ 4 Milyan sanadkii | Martech Zone
Muuqaalkaan Hal-abuurka ah ee Iibinta Ayaa Khasaari Kara Shirkaddaada $ 4 Milyan sanadkii
Jimcaha, Sebtember 5, 2014 Douglas Karr
Waxaan u muuqanaa inaan ka hadalno iibinta dakhliga soo xarooda, laakiin kama hadleyno khasaaraha marka aysan si fiican u socon. Iibintu waa isboorti dhiig ee shirkadaha badankood waxayna umuuqataa in yar oo dulqaad leh maalmahan xirfadlayaasha iibka inay kor uqaadaan, xiriir dhisaan, macaamiishana badalaan. Ku Maareeyaha iibka xitaa waxay leedahay booska aan laga xujeyn karin ee ah ku dhiirrigelinta iyo kaxeynta shaqaalaha la kulanka iyo yoolalka ka sarreeya. Soo gal maareeyaha qaldan oo shaqaalaha iibka oo dhami way khaldami karaan. Waxaan goobjoog ugu ahaa gacanteyda koowaad, anigoo u kuur galaya sida maamulka maareynta iibku diirada u saaran yahay soo jeedinta, soo gelinta xogta ama u dhiirrigelinta qof ku fiican iibka meel ka baxsan bailiwick-kooda.
Tikniyoolajiyadda karti-siinta iibku waa aalad lagu caawinayo shaqaalahaaga iibinta isla markaana awood u siinaya awooddooda inay si hufan oo wax ku ool ah ugu socdaan. Maaha inay kor u qaaddo caqabadaha, waa inay ka saartaa. Waa mid ka mid ah sababaha aan u jecel nahay kuwayaga Iibka madal (kafaala) aad u badan. Dashboard-kooda loogu talagalay Salesforce ee shaqaalaha iibka iyo maamulkaba waxay si weyn u yareyneysaa waqtiga ay duubto, la socoto oo ka warbixiso dhaqdhaqaaqa iibka.
Qaar badan oo maareeyayaasha iibka ah ayaa ururada ka hela wax yar oo aan ka helin wax horumarineed. Hase yeeshe, waxaa laga filayaa inay ka gudbaan caqabadaha labadaba u gudubka maareynta iyo sidoo kale isbeddelka ka imanaya iibinta alaabada iyo bixinta aragti ganacsi oo iyaga u gaar ah. Ururadaas maalgashiga ku sameeya maareeyayaashooda, badankood waxay ku fashilmaan inay maal gashadaan istiraatiijiyad si ay u horumariyaan xirfadaha loo baahan yahay si maamulayaasha looga dhigo kuwo waxtar leh intii suurtagal ah. Tani kaliya saameyn weyn kuma lahan maareeyayaasha laftooda, laakiin sidoo kale waxay ka dhigeysaa kuwa wax iibiya waxtar yar iyo ugu dambeyntiina, waxay dhaawaceysaa khadka hoose ee shirkadda. Jessica Cash, Agaasime Sare, Horumarinta Xalinta & Hal-abuurka ee CEB Global.
Guntii iyo gunaanadkii ayaa ah in hal maamule oo fashilmay uu waayi karo shirkad kor u dhaafaysa $ 4 milyan oo wax soo saar luntay, maamul xumo kooxeed, khibrad macmiil la'aan, qoritaan, mushahar iyo tababar. Halkan waxaa ah burburka sida Maamulayaasha Iibinta u fashilmaan.
Tags: maamul xumocebblogyada cebku guuldareysatoguuldareysigajessica lacag caddaan ahkharashka maamulkadashboard iibkaKordhinta Iibkaikhtiraaca iibkamaaraynta iibkakharashka maaraynta iibkawax soo saarka iibkaqorista iibkawarbixinta iibkamushaarka iibkakooxda iibkatababarka iibkaiibinta
Sare u kaca Ujeedada-Keenay Suuqgeynta Bulshada
Sida Loogu Tayeeyo Qoraalkaaga Nakhshadeynta Mashiinnada Raadinta ee 2014